Waa Kuma Xidiga Man United Ka Tirsan Ee Maamulka Kooxdiisa Kaga Yaabsaday Baadhitaankii Lagu Sameeyay? - Gool24.Net
Waa Kuma Xidiga Man United Ka Tirsan Ee Maamulka Kooxdiisa Kaga Yaabsaday Baadhitaankii Lagu Sameeyay?
20/05/2020 Mahamoud Batalaale
Ciyaartoyda kooxaha Premier League ayaa ilaa shalay dib ugu soo laabanayay xarumaha tababarka kadib markii isniintii si rasmi ah cod loogu ansixiyay in kooxuhu ay group yar yar tababarka ku bilabaan karaan.
Manchester United ayaa shalay xarunta tababarka kooxdeeda ku soo laabtay waxaana muddo laba bilood markii ugu horaysay ah garoonka soo wada galay Solskjaer iyo ciyaartoyda kooxdiisa United.
Laakiin waxaa la ogaaday in uu jiray hal ciyaartoy oo Manchester United ah oo markii baadhitaanka lagu sameeyay ay maamulka United layaabeen xaaladiisa.
Intii lagu jiray go’doonkii fayraska koronaha waxa uu Solskjaer la socday xaalada ciyaartoyda kooxdiisa iyada oo xidig walba lagu xidhay aalada GPS-ka kaas oo ay kooxaha Premier League u adeegsanayeen in ay xaalada tababar iyo shaqo ee xidigaha kula socdaan.
Markii ay ciyaartoyda kooxaha Premier League soo laabteen waxaa sida caadada ah loo sameeyaa baadhitaano caafimaad oo jidh ahaaneed iyada oo hore looga qaaday baadhitaanka Fayraska koroona balse waxaa hubaal ahayd in la filayay in ciyaartoydu ayna heerkii jidh ahaaneed ee ugu fiicnaa ku soo laaban karin.
Balse baadhitaankii ciyaartoyda Manchester United waxaa lagu ogaaday in Bruno Fernandes uu layaab ku riday maamulka Old Trafford kadib markii uu ku soo laabtay xaalad lama filaan ah oo uu jidhkiisu heer sare ku jiray.
Bruno Fernandes ayaa si waali ah ugu soo shaqeeyay gurigiisa isaga oo noqday ciyaartoyga ugu xawaaraha dheeraa markii ay Machester United tababarka shalay ku soo laabtay wuxuuna ku orday 34.27 kilomitir saacadiiba iyada oo inta loo cayimay ee uu ku ordayay ahayd 5.5 mitir.
Dhamaan ciyaartoyda kale ee Manchester United ayaa intii go’doonka lagu jiray waxay ordeen in ka yar inta loo diwaan galiyay Fernandes waana sababta uu u noqday xidiga baadhitaankiisii uu layaabku ka soo baxay.
Laakiin ma aha oo kaliya xawaaraha balse natiijada baadhitaanka Man United ee xidigaha kooxdeeda ayuu Fernandes noqday midkii ugu natiijada fiicnaa.
Intii go’doonka lagu jiray waxa uu Bruno Fernandes noqday xidigii ugu xawaaraha dheeraa dhamaan ciyaartoyda Manchester United taas oo keentay in markii la soo laabtay uu baadhitaankii jidh ahaaneed ee xidiga reer Portugal noqoday mid lama filaan ah.
Waxa uu Fernandes muujiyay xilka uu iska saaray naftiisa si uu garoomada ugu soo laabto isaga oo aan waxba iska badalin heerkii ugu saraysay ee uu jidh ahaan ku jiray markii la fasaxay kulamadii Premier League.
Wargayska Manchester Evening News ayaa shaaciyay in Bruno Fernandes uu ka yaabsaday maamulka Man United kadib markii ay soo baxday natiijadii baadhitaanka ee xaalada jidh ahaaneed ee xidigaha United.
Bruno Fernandes oo bishii January Man United ku soo biiray ayaa gabi ahaanba badalay xaaladii ay kooxdu ku jirtay waxayna qabtii go’doonka Fayrasku timid xili ay Man United ku socotay natiijooyin aad u fiicnaa oo jamaahiirta kooxda rajo fiican u abuuray.
Waxay hadda taageerayaasha Man United sugayaan in kooxdoodu ay soo laabto iyada oo heer fiican ku jirta si ay afarta sare ee Champions League loogu soo baxayo ugu sii dagaalanto.